‘हल अफ फेम सिजन २’ को फाईनल आज हुँदै , को बन्ला बिजेता ? « MNTVONLINE.COM
काठमाडौं । एमएनटीभी अष्ट्रेलियाले आयोजना गरेको प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय अनलाईन गायन प्रतिस्पर्धा हल अफ फेम सिजन २ ले आज बिजेता घोषण गर्दैछ । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको उक्त कार्यक्रमको आज फाईनल हुने भएको हो । नेपाली सांगीतीक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल यो शोले आज सिजन २ को विजेता पाउँदैछ ।
उत्कृष्ट ५० मध्येबाट टप २७, टप ९, टप ६ हुँदै आज (शनिबार) ३ जना प्रतिस्पर्धीले उपाधीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । फाइनलमा पुगेका इलामका टीका मगर, ललितपुरका पूर्ण विक र बुटवलका विजय सुनारले आज आफ्नो प्रस्तुती दिँदैछन् । हिजो (शुक्रबार) भएको टप ६ मा प्रतिस्पर्धाबाट यी तीन जना प्रतिस्पर्धीले फाईनलका लागि आफ्नो सिट सुरक्षित गरेका हुन् ।
हल अफ फेम सिजन २ को विजेताले १ लाख नगद पुरस्कारका साथै अफिसियल गीत तथा भिडियो रेकर्डिङ र सबै निर्णायकहरूको साथमा अष्ट्रेलिया टुर जाने अवसर पाउनेछन् ।
हल अफ फेम सिजन २ मा निर्णायकको रुपमा वरिष्ठ गायक दिप श्रेष्ठ, विवेक श्रेष्ठ र रजिना रिमाल रहेका छन् । हल अफ फेममा विश्वका विभिन्न १२ देशबाट ६ सय भन्दा बढीले सहभागीता जनाएका थिए । शनिबार राति ८ बजे फाईनल कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनका साथै एमएनटीभी अष्ट्रेलियाका अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरुमा एकैसाथ प्रशारण गरिँदै छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि विस्तृत आदेश जारी गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय
परिवर्तन उल्ट्याउने शक्तिबाट चलखेल भयो : अध्यक्ष दाहाल !
क्वीन्सल्याण्डमा गोली हानी दुईजनाको हत्या, एकजना पक्राउ
तामिलका लोकप्रीय अभिनेता विवेकको अचानक मृत्यु
बुद्धिजीविहरुको सहर – होबर्ट